ဘရိုက်တန် အသင်းကို ခက်ခက်ခဲခဲ အနိုင် ကစားပြီး အဆင့်3နေရာ တက်လှမ်း သွားတဲ့နောက် ပြိုင်ဖက်တွေကို သတိပေးလိုက်တဲ့ ဖိုဒန် - SPORTS MYANMAR
ဘရိုက်တန် အသင်းကို ခက်ခက်ခဲခဲ အနိုင် ကစားပြီး အဆင့်3နေရာ တက်လှမ်း သွားတဲ့နောက် ပြိုင်ဖက်တွေကို သတိပေးလိုက်တဲ့ ဖိုဒန်
မန်စီးတီး အသင်းဟာ ဒီနေ့ နံနက် မှာတော့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲကျန် တစ်ပွဲ အဖြစ် အီတီဟတ် ကွင်းထဲမှာ ဘရိုက်တန် အသင်း နဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ ရပြီး 1 –0ဆိုတဲ့ ရလဒ် နဲ့ အနိုင်ယူ သွားနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ အဆိုပါ နိုင်ပွဲကြောင့် မန်စီးတီး တို့ဟာ အမှတ်ပေး ဇယား အဆင့်3နေရာကို တက်လှမ်း သွားနိုင်ခဲ့ ပါပြီ ။
ဒီပွဲ မှာတော့ မန်စီးတီး အသင်း အတွက် တစ်လုံးတည်းသော အနိုင်ဂိုး ကို ကွင်းလယ် တိုက်စစ် ကစားသမားလေး ဖြစ်တဲ့ ဖီးလ် ဖိုဒန် က ပထမပိုင်း ပြီးဆုံးခါနီး မှာ အသင်းဖော် ကယ်ဗင် ဒီဘရိုင်း ရဲ့ ပေးပို့မှု ကနေ တစ်ဆင့် သွင်းယူ ပေးသွား နိုင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
အဲ့ဒီနောက် ပွဲစဉ် အတွင်း နှစ်ဖက် အသင်းဟာ ဂိုးတွေ ဆက်လက် သွင်းယူ နိုင်ဖို့ အခက်တွေ့ သွားခဲ့ကြ ပါတယ် ။ အဲ့ဒီနောက် ပွဲချိန် ပြီးဆုံးခါနီး အချိန်ပို မှာ မန်စီးတီး အသင်းဟာ ပင်နယ်တီ ရရှိခဲ့ပေမယ့် စတာလင်းက ဂိုးအဖြစ် မပြောင်းလဲ နိုင်ခဲ့တဲ့ အတွက် မန်စီးတီး တို့ တစ်ဂိုး နဲ့သာ အနိုင် ရရှိ ခဲ့ကြ ပါတယ် ။
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်နေ ပါစေ မန်စီးတီး တို့ဟာ ပြိုင်ဖက် ယူနိုက်တက် ၊ လီဗာပူး တို့နဲ့ တစ်ပွဲလျော့ ကစားထား ခဲ့တဲ့ အချိန်မှာ ရမှတ် 32 မှတ် အထိ စုဆောင်း ထားနိုင် ခဲ့ပြီး အမှတ်ပေး ဇယား အဆင့်3နေရာကို တက်လှမ်း သွားနိုင်ခဲ့ကြ ပါပြီ ။ အကယ်လို့ ပွဲကျန်ကို အနိုင် ကစား နိုင်ရင် မန်စီးတီးတို့ အဆင့်2နေရာကို တက်လှမ်း နိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
အဆိုပါ ပွဲစဉ် အပြီးမှာတော့ မန်စီးတီး အသင်း အတွက် တစ်လုံးတည်းသော အနိုင်ဂိုး သွင်းယူ ပေးသွားနိုင် ခဲ့တဲ့ ကွင်းလယ် တိုက်စစ် ကစားသမားလေး ဖီးလ် ဖိုဒန် က အသင်းဟာ အကောင်းဆုံး ပုံစံကို တစ်ဖန် ပြန်လည် ပိုင်ဆိုင် နိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ပြိုင်ဖက် တွေကို သတိပေး သွားခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
” ကျွန်တော်တို့ တွေဟာ အကောင်းဆုံး ပုံစံကို တစ်ဖန် ပြန်လည် ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ ကြပြီလို့ ခံစားနေခဲ့ရ ပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ တွေဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ် အနည်းငယ်ကနေ ယုံကြည်မှု တွေကို ပြန်လည် တည်ဆောက် ရယူ နိုင်စွမ်း ရှိနေကြ ပါတယ် ”
” ဒီနေ့လည်း ကျွန်တော်တို့ တွေဟာ ဒီထက် ပိုကောင်းအောင် ကစား နိုင်ခဲ့ သင့်တယ်လို့ ခံစား ခဲ့ကြရ ပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ နိုင်ပွဲ နဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ ကြိုးစား အားထုတ်မှု တွေကို လုပ်ဆောင် နိုင်ခဲ့ကြ ပါတယ် ” လို့ ဖိုဒန် က ပြောကြား သွားခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
ဒါဟာ မန်စီးတီး အသင်း အတွက်တော့ ပြိုင်ပွဲစုံ 14 ပွဲဆက် ရှုံးပွဲ မရှိသေးတဲ့ မှတ်တမ်းကောင်း တစ်ရပ် ပိုင်ဆိုင်ခြင်း ဖြစ်ခဲ့ရပြီး နောက်ဆုံး ကစား ခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲစုံ7ပွဲဆက် အနိုင် ရရှိခြင်းလည်း ဖြစ်သွား ခဲ့ရ ပါတယ် ။ ဖိုဒန် ကတော့ နောက်ဆုံး မိနစ် အထိ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ ကြတဲ့ အသင်း အတွက် ဂုဏ်ယူကြောင်း ဆက်လက် ပြောခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
” ကျွန်တော်တို့ တွေဟာ နောက်ဆုံး မိနစ် ခရာ မှုတ်တဲ့ အထိ တိုက်ပွဲဝင် နိုင်ခဲ့တဲ့ အတွက် ဂုဏ်ယူမိ ပါတယ် ။ အားလုံးကို ပြန်လည် ခြုံကြည့် လိုက်မယ် ဆိုရင် ဒါဟာ ခမ်းနားတဲ့ ရလဒ် တစ်ခု ပါပဲ ။ ဘရိုက်တန် အသင်းက ကျွန်တော် တို့ကို ကစားရ ခက်ခဲ သွားစေခဲ့ ပါတယ် ”
” ပထမပိုင်း ပြီးခါနီး ဂိုး ရရှိခဲ့တာက ကျွန်တော်တို့ အတွက် အရမ်းကို အရေးကြီးခဲ့ ပါတယ် ။ အဲ့တာကပဲ အဆုံးသတ်မှာ အနိုင်ဂိုး ဖြစ်သွားခဲ့ ရတဲ့ အတွက် ကျွန်တော် တစ်ကယ်ပဲ ကြည်နူး ခဲ့ရပြန် ပါတယ် ။ ကျွန်တော် ညာခြေ နဲ့ သိပ်ပြီး ဂိုးသွင်း နိုင်စွမ်း မရှိ ပါဘူး ။ အခုလို ဂိုးရ ခဲ့တဲ့ အတွက် ဝမ်းမြောက်မိ ပါတယ် ”
” ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာ ပွဲကျန် တစ်ပွဲ ကစား ရဖို့ ရှိနေ သေးတယ် ဆိုတာကို သိရှိ ထားကြ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ တွေဟာ လာမယ့် ပွဲစဉ် ကိုပဲ ရှေးရှု သွားကြမှာပါ ။ လာမယ့် ပြိုင်ဖက် ကပဲ ကျွန်တော်တို့ အတွက် အရေးကြီး ပါတယ် ” လို့ ဖိုဒန် က ပြောခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် အသင်းသား နှစ်ဦးဟာ အာတီတာ အတွက် အဓိက ပြဿနာ ဖြစ်နေကြောင်း ဝေဖန်ထောက်ပြလိုက်တဲ့ အလန်စမစ်
ဟာဗက်ဇ် ကို ပရီးမီးယားလိဂ် စူပါစတား ၂ဦး ရဲ့ ကစားသမား ဘဝ အစ က ရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ ခိုင်းနှိုင်းလိုက်တဲ့ လမ်းပတ်
အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် အဖြစ် ဦးလေး ဖြစ်သူ ကို ခေါ်ယူဖို့ လမ်းပတ်ထံ အကြံပြု မက်ဆေ့ချ် ပေးလိုက်တဲ့ ပေါလ်မာဆင်
ကျောလုံးပြည့် တက်တူးကြီးကြောင့် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ပြီး နောင်တရနေမိတဲ့ လီရွိုင်ဆာနေး
January 24, 2021 - by Editor
‘အိမ်ထောင်မှု ၊ ဘုရားတည် ၊ ဆေးမင်ရည်စုတ်ထိုး ၊ ဤ ၃ ခု ချက်မပိုင် ၊ နောင်ပြင်ရန် ခက်သည့်အမျိုး’ ဆိုတဲ့ ဆိုရိုး စကားတစ်ခွန်း ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာ ရှိပါတယ် ။ အဓိပ္ပါယ် ကတော့ အိမ်ထောင် ပြုတာ ၊ ဘုရားတည်တာ ၊ ဆေး မင်ကြောင် စုတ်ထိုး …
ဆော်ဒီ က ကမ်းလှမ်းမှုကို ငြင်းတဲ့ ရိုနယ်ဒို ၊ ကံကြမ္မာတူကြတဲ့ မီလန် ညီနောင်တို့ ၊ အပြောင်းအရွှေ့ လှုပ်ခတ်သံတွေ နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
77 မီးနစ်သာ ပါဝင် ကစားရသေးပေမယ့် ၊ ရီးရဲ ကစားသမားဘ၀ သွင်းဂိုးထက် ကျော်လွန်သွားတဲ့ လူကာ ယိုဗစ်
မက်ဆီ နဲ့ ရော်နယ်ဒို တို့ရဲ့ ကွာခြားတဲ့ စရိုက်တစ်ခု နဲ့ ဘယ်သူ့ကို ပိုနှစ်သက်သလဲ ဆိုတာ ထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့ အာသာ
အာဆင်နယ် ရောက်တော့မယ့် စတားကွင်းလယ်လူ ၊ မီလန်ကို ပြောင်းသွားတဲ့ ချဲလ်ဆီးလူငယ် နဲ့ . . . . . နောက်ဆုံးရ ကြားဖြတ်သတင်းများ
ဂန်းနား တိုက်စစ်မှူးဟောင်း အလန်စမစ် က ဝီလီယံ နဲ့ နီကိုလပ်စ် ပေပေ တို့ ခြေစွမ်း မပြနိုင်တာဟာ အာတီတာ အတွက် ကြီးမားတဲ့ ပြဿနာ တစ်ရပ် ဖြစ်နေကြောင်း သုံးသပ် ပြောကြား လိုက်ပါတယ် ။ ပေပေ နဲ့ ဝီလီယံ တို့ဟာ မနေ့က ကစားခဲ့တဲ့ ဆောက်သမ်တန် အသင်းနဲ့ ပွဲမှာ …